Fifanarahana momba ny zon'ny zaza (FIZOZAZA) - Arozaza
Fifanarahana momba ny zon’ny zaza (FIZOZAZA)
Ireo Zo Fototra ao anatin’ny FIZOZAZA
Raha vao teraka ny zaza, dia tokony manao fanambaram-piterahana any amin’ny Firaisana misy ny toerana nahaterahan’ilay zaza ny raiamandreny. Ho voarakitra anatin’ny rejistra maha-olom-pirenena ny momba ilay zaza. Ny fahavitan’ny fanambaram- piterahana dia afahana manamarina ny fisiana sy ny maha-olom-pirenena ny zaza. Raha tsy vita izany dia toa ny olona tsy misy ilay zaza dia ho sarotra ny fiarovana azy. Ho voaharo amin’ny famarotana, ny fangalaran-jaza, ny fanambadiana tsy ampy taona, ny fanararaotana ara-nofo, ny fampiasana ny ankizy tsy ampy taona amin’ny asa an-terivozona, fanaramana ny ankizy hanao miaramila. Ny fananana KOPIA dia manampy betsaka ny fampidirana ny zaza an-tsekoly sy ny fandehanany ny amin’ny tobi- pahasalamana.
Ny zo ho salama dia tokony hananan’ny zaza rehetra. Isan-taona anefa dia mbola maro ny zaza maty tsy mahatratra ny faha-dimy taonany akory. Maherin’ny 9 lavitrisa ny zaza maty eran-tany. Ny fototra mahatonga izany dia tsy fahampian-tsakafo, tsy fanana rano fisotro madio sy ny foto-drafitr’asa mifanentana amin’izany, ny ponemonia, ny tazo-moka, ny tsimok’aretina VIH/SIDA, tsy fisian’ny fitsaboana ara-dalàna.
3. Zo hianatra
Tokony hianatra satria manampy ny fahafantarana avy hatrany ny fomba fiarovana amin’ny aretina, sy fampihenana ny taha-pahafatesan’ny zaza sy ny reny, ny fanabeazana ny zaza hianatra, hivoatra ary hiady amin’ny fahantrana sy ny fanamparam-pahefana.
Ny dikan’ny hoe fiarovana dia afahana misoroka ny herisetra rehetra anisan’izany ny fanararaotana ara-nofo atao fahazoam-bola, ny fivarotana sy ny fampiasana ny ankizy, ny fomba amam-panao mitera-doza, ny fanambadian’ny zaza tsy ampy taona.
Ny fiaraha-monina manana fahalalahana na demokratika dia manan-jo amin’ny fandraisana anjara avokoa ny olom-pirenena ao aminy, eny fa na dia ny ankizy aza. Omena vaovao sahaza ny taonany ny ankizy, ampandraisana anjara izy ireo amin’ny fanapahan-kevitra any an-tokantrano, any an-tsekoly, any amin’ny fokontany misy azy ireo. Adidy sy andraikitr’ireo firenena sy fanjakana nankato ny FIZOZAZA ny fampandraisana anjara ny zaza. Tafiditra anatin’ireo fepetra efatra ireo ny Fandraisana Anjara.